नेपालका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरे यस्तो घोषणा ! - Nepal Insider
Home/अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/नेपालका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरे यस्तो घोषणा !
काठमाडौं– चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ छोटो समयका लागि नेपाल भ्रमणमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको छ ।भारतको भ्रमण सकेपछि बेइजिङ फर्किने क्रममा आगामी १५ अक्टोबरमा उनी नेपाल आउने भएका हुन ।तर यो भ्रमण औपचारिक किसिमको भने हुने देखिँदैन । सार्वजनिक भए अनुसार, उनी जम्मा ९ घण्टा नेपाल बस्नेछन् ।भारतमा भने राष्ट्रपतिले ४ दिने बिताउने कार्यक्रम छ । उनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तमिलनाडुको तटमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ । भारतमा रहँदा राष्ट्रपति शीले पुरातात्विक महत्वका सांस्कृतिक क्षेत्रहरुको अवलोकन समेत गर्ने कार्यक्रम छ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणको तयारीका लागि सेप्टेम्बरमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्ने बताइएको छ ।यसअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओले सन् २०१२ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा उनी करीब ५ घण्टा काठमाडौमा रहेका थिए ।
बेइजिङ, १६ भदौ (रासस-एपी) – चिनियाँ औद्योगिक उत्पादनसम्बन्धी दुई वटा सर्भेक्षणले चिनियाँ सामानको मागमा कमी आएको देखाएका छन् । अमेरिकासँग व्यापार र प्रविधि विषयमा जारी व्यापार युद्धले चिनियाँ औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको हो । चिनियाँ व्यावसायिक अखबार काइसिनद्वारा विश्लेषणात्मक खरिद सूचकले गत जुलाईको ४९.९ विन्दुबाट ५०.४ विन्दुमा पुगेको देखाएको छ । कूल १०० अंक रहेको यस सूचकले पछिल्लोपटक कारखाना उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको देखाएको छ, तर वार्षिक विन्दुगत उत्पादनमा कमी आएको देखिएको छ ।
अखबारका अनुसार कारखानबाट उत्पादित वस्तुको मागमा व्यापक कमी आएको छ । शनिबार नै चिनियाँ औद्योगिक समूह “चाइना फेडेरेसन अफ लजिस्टिक एन्ड पर्चेजिङ”द्वारा प्रकाशित अर्को सर्भेक्षणमा बजार माग “सापेक्षित रुपमा कमजोर” रहेको देखाएको छ । अध्ययनमा जुलाईको ४९.७ अंकको तुलनामा पछिल्लो अगस्टमा ४९.७ विन्दुमा आइपुगेको छ । चिनियाँ निकासीकर्ताहरु अमेरिकी करवृद्धिका अघिल्तिर संघर्षरत देखिएका छन् । जुलाईमा चिनियाँ सामानको अमेरिका निकासीमा ६.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । चीनको सबैभन्दा ठूलो बजार अमेरिका हो ।
अमेरिका र चीनले आइतबार मात्र एकअर्का मुलुकका अर्बौं डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । चीनले निर्माण क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न थालेको छ । चीनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको जुन महिनासम्म आर्थिक वृद्धि ६.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । विगत २६ वर्षमा चीनको यो सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धि हो ।
चिनियाँ जनमुक्ति सेना भन्यो : ‘हामी नेपालीको खुसि, प्रगति र बिकाश देख्न चाहन्छौँ, हामी सधै नेपालको साथमा छौं’
कश्मीरमा भारतले गरेको कडाइप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘गम्भीर चासो’ दियो भारतलाई यस्तो चेतावनी